Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi njem Russia » Pobeda ụgbọ elu na-amalite usoro ụgbọ elu zuru oke site na ọdụ ụgbọ elu Moscow Sheremetyevo
Pobeda ụgbọ elu malitere ọrụ ụgbọ elu si Sheremetyevo dị ka akụkụ nke atụmatụ Aeroflot Group iji bulie ụzọ na otu ụgbọ mmiri, na-eburu n'uche mkpa dị elu maka njem dị ala.
Ọbịbịa nke ụgbọ ala dị ọnụ ala ga-eme ka mgbasawanye ụzọ ụgbọ elu ahụ gbasaa
A na-arụ ụgbọ elu ahụ na Terminal D
Oge oge udu mmiri nke Pobeda gụnyere ụgbọ elu si Sheremetyevo gaa ụlọ iri na anọ
Gbọelu ụgbọ elu Russia dị ọnụ ala, Pobeda ụgbọ elu, onye otu Aeroflot Group, amalitela ịrụ ọrụ ụgbọ elu zuru oke nke Moscow Ọdụ ụgbọ elu nke Sheremetyevo International Airport.
Pobeda ụgbọ elu bidoro ịrụ ọrụ ụgbọ elu si Sheremetyevo dị ka akụkụ nke atụmatụ Aeroflot Group iji bulie netwọọdụ na otu ụgbọ mmiri, na-eburu n'uche mkpa dị elu maka njem njem dị ọnụ ala.
Akụrụngwa nke oge a, akụrụngwa mmepụta na ndị ọrụ ruru eru nke Ọdụ ụgbọ elu Sheremetyevo na-eme ka o kwe omume inye njikwa ọrụ ụgbọelu na-agbanwe nke ọma n'ime nkeji 25. Onye na-ahụ maka njikwa nke Sheremetyevo Airport, Sheremetyevo Handling LLC, na nkwado nkewa nkewa ọdụ ụgbọ elu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke Group, na-enye ndị njem na ụgbọ elu ọrụ n'oge kachasị dị nso iji hụ na ụgbọ elu ga-alaghachi. Teknụzụ ndị na-arụ ọrụ ụgbọ elu na ndị njem na-eweta ngwa ngwa ma ọ bụ ihe yiri nke ọtụtụ arụmọrụ, na-eburu n'uche usoro nchekwa niile.
Mikhail Vasilenko, Director General nke JSC SIA kwuru, "Usoro mmemme zuru oke nke ụgbọ elu nke Pobeda Airline si Sheremetyevo bụ ụzọ ọzọ na mmepe nke onye otu anyị - Aeroflot Group, ma anyị nwere obi ụtọ ịnabata otu n'ime ngwa ngwa. ụgbọ elu na Europe. Ọbịbịa nke ụgbọ elu ụgbọ ala dị ọnụ ala ga-eme ka mgbasawanye nke ọdụ ụgbọ elu ahụ gbasaa ma nye ndị njem anyị ohere ọhụrụ gbasara ikuku ụgbọ elu. ”
Director General nke Pobeda, Andrei Kalmykov, kwuru, “Lamalite ụgbọ elu site na ọdụ ụgbọ elu Moscow nke abụọ anyị Mmeri ọ bara uru karịa ndị ahịa anyị. Ugbu a, ha nwere ike ịhọrọ ọ bụghị naanị ụgwọ ụgbọ, njem na ụbọchị ọpụpụ, mana ọbụlagodi ọdụ ụgbọ elu dị na Moscow. Anyị na-ahụ ihe karịrị 90% nke ikike ugbua na ụgbọ elu mbụ anyị, nke a na-ahụkarị maka Pobeda. "
A na-enyefe ụgbọ elu ahụ na Terminal D. Pobeda ndị njem na-enye ọtụtụ ọrụ na ohere ka ha na-eche ụgbọ elu ha. Ndị njem na ụmụ nwere ike ịga leta ụlọ nne na nwa dị mma, ndị njem nwere nkwarụ nwere ohere ịnweta Saturn Lounge nke oge a na njedebe. Ndị njem ga-enwekwa ekele maka ọrụ dị elu na Lounge Ezinaụlọ, ụlọ ihi ụra na ezumike nke dị na mpaghara ọha nke Terminal D. Solọ ezumike azụmahịa Sochi dị mma maka ndị njem na-azụ ahịa azụmaahịa ma gosipụta ọmarịcha ime mara mma.